Obimin® (အိုဘီမင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Obimin® (အိုဘီမင်)
Obimin (အိုဘီမင်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Obimin® (အိုဘီမင်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Obimin (အိုဘီမင်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Obimin ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေး သည် ဗီတာမင်ဓါတ်မျိုးစုံပါဝင်သော ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
Obimin ဆေးကို-ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နှင့် မွေးဖွားပြီးချိန်များတွင် ဗီတာမင်နှင့် သံဓါတ်အားဖြည့်ရန် အသုံးပြုကြသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်လေ့ရှိသော မူးမောခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ သွေးအားနည်းခြင်း၊ ဗီတာမင်ဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လေ့ရှိသော ဘယ်ရီဘယ်ရီ ရောဂါ၊ အာရုံကြောရောင်ရမ်းခြင်း ၊ကြွက်တက်ခြင်းများအတွက်သောက်သုံးနိုင်ပါသည်၊
Obimin (အိုဘီမင်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
မိမိဆရာဝန်ညွန်ကြားသော ဆေးပမာဏ၊ သောက်ရမည့် အချိန်အညွန်းအတိုင်း သောက်သုံးရမည်။
ဆေးမသောက်သုံးမီ ဆေးညွန်း သေချာစွာ ဖတ်ရမည်။
ဆေးညွန်းတွင် ပါရှိသောအကြောင်းအရာများကို သေချာစွာနားမလည်ပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမည်။
Obimin (အိုဘီမင်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Obimin ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Obiminကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Obimin ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Obimin ဆေး ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Obimin (အိုဘီမင်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေး၊ အစားအသောက်၊ ဆိုးဆေး၊ တာရှည်ခံပစ္စည်းများ တိရစ္ဆာန် နှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများရှိပါက ကြိုတင် အသိပေးရန်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Obimin (အိုဘီမင်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Obimin ဆေးသည် ဗီတာမင်ဓါတ်မျိုးစုံပါဝင်သော ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
Obimin ဆေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နှင့် မီးဖွားပြီးချိန်များတွင် ဗီတာမင်နှင့် သံဓါတ်အားဖြည့်ရန် အသုံးပြုကြသည်။
Obimin (အိုဘီမင်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Obimin ဆေးကြောင့်မည်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရရှိနိုင်သနည်း။
အခြားသော ဆေးတစ်မျိုးမျိုးသောက်သုံးနေစဉ် Obimin ဆေးသောက်သုံးပါက အများစုမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမရရှိနိုင်ပါ။ သို့သော် ဆေးသောက်သုံးနေစဉ်အချိန်အတွင်း ပြဿနာတစ်ခုခုပေါ်ပေါက်လာပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရမည်။
ဓါတ်မတည့်ခြင်း အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ နှင့် လည်ချောင်း ဖောယောင်လာခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Obimin (အိုဘီမင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Obimin ဆေး ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Obimin (အိုဘီမင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Obimin ဆေး က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Obimin (အိုဘီမင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Obiminဆေး ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Obimin (အိုဘီမင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Obimin ဆေးအသုံးပြုရန် ဆရာဝန်များနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် (သို့) ဆရာဝန်နှင့် ညွှန်ကြားသည့် အတိုင်းသောက်သုံးရမည်။
ကလေးတွေအတွက် Obimin (အိုဘီမင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Obimin (အိုဘီမင်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေးပြားတစ်ပြားတွင် ဗီတာမင်A 3000 IU၊ ဗီတာမင်D 400 IU၊ ဗီတာမင် C 100 mg၊ ဗီတာမင်B1 10mg ၊ ဗီတာမင်B2 2.5mg၊ ဗီတာမင်B6 15mg၊ ဗီတာမင်B12 4mcg၊ niacinamide 20mg၊ pantothenic acid 7.5mg၊ ဖောလစ်အက်ဆစ် 1mg၊ သံဓါတ် 30mg၊ ကယ်လ်ဆီယမ် 32.5mg၊ copper 100mcg၊အိုင်အိုဒင်းဆားဓါတ် 100 mcg ပါဝင်ပါသည်။
Obiminဆေး ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Obimin. http://www.medicatione.com/?c=drug&s=new%20Obimin. Accessed September 16, 2016.
Obimin. http://www.everydayhealth.com/drugs/multivitaminamin-prenatal. Accessed September 16, 2016.
Obimin. http://www.ndrugs.com/?s=Obimin. Accessed September 16, 2016.
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲ